Turkey aims to secure larger slice of global cruise trade pie |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Turkey ine tarisiro yekuwana hukuru hukuru hwepasi rose rwendo rwekutengesa pie
Turkey ine tarisiro yekuwana hukuru hukuru hwepasi rose rwendo rwekutengesa pie
Turkey yakagadzira "Turkey Cruise Ship Platform" inosanganisira 13 maguta echiteshi mukuyedza kuwana chidimbu chakakura chepayi yekushanya yepasirese.
Indasitiri yezvikepe iri kukura, uye Turkey inoda kutora chikamu chakakura chemusika, Izmir Chamber of Trade (IZTO) Sachigaro Ekrem Demirtas akadaro kumusangano wapfuura. "Muna 2003, ngarava chete dzakange dzarasika nzira ndidzo dzaizouya kuIzmir, asi gore rapfuura Izmir yakagamuchira vashanyi vanosvika 504,000," akadaro Demirtas, achiwedzera kuti chinangwa chavo ndechekuti maguta ese echiteshi cheTurkey awane mwero wakafanana webudiriro. Vakati izvi zvainyanya kuitika sezvo ese maguta eTurkey akanakidzwa nemamiriro ekunze akanaka.
Pakati pemaguta echiteshi kuve chikamu cheplatform pane Istanbul, Izmir, Mersin, Iskenderun, Trabzon, Cesme, Canakkale, Marmaris ne Kusadasi, pakati pevamwe. Sarudzo iyi yakaitwa pamusangano ku IZTO wakapindwa nemapurezidhendi emachiteshi kubva kumadhorobha akasiyana siyana muTurkey, makamuri ezvekutengeserana nekutengeserana, dzimba dzekutengesa mugungwa, mamaseya nemumiriri kubva kumahofisi egavhuna. Vati chikuva chitsva ichi, pamwe nekumiririrwa kwenhengo dzebazi rezvekutakurwa kwezvinhu, Maritime uye Kutaurirana, uye zveMasangano neKushanya, zvichakurumidza kutora zita rekuti "Mubatanidzwa weTurkey Cruise Ship Ports," zvichitevera chirevo cheKhabhinethi. Demirtas akataurawo kuti parizvino hapana mutumbi wekutarisa kuti ngarava dzechikepe dzinomira pazviteshi zveTurkey dzakagamuchira sevhisi yepamusoro uye hapana kushambadzira kana kuziva nzira yekuwedzera mikana. Achibata pamusoro pekuvakwa kwechikepe chitsva chengarava muIzmir, Demirtas akakoka varimi kuti vatore chikamu munaSeptember 7 nyoro yechiteshi. Nekupedziswa kwechiteshi, Izmir ichakwanisa kugamuchira 2 mamirioni vafambi vengarava, akadaro Demirtas. Zvichakadaro, purezidhendi weGreek Ports Association uye mutungamiri wePiraeus Port, George Anomeritis akati Chikunguru 3 kuti Turkey neGirisi vaifanirwa kubatana nekudyidzana muindasitiri yezvikepe.
Anomeritis, aimbova gurukota reGreek rezvekurima nekushanya, akashanyira Demirtas pamwe nemukuru mukuru weMedcruise Line, Stavros Hatzakos. Piraeus neIzmir anova ndiwo madoko makuru maviri munzvimbo iyi, akadaro Anomeritis. Kushanya kwechikepe hakugone kubudirira nechiteshi chimwe chete. Machiteshi ese mudunhu anofanirwa kubudirira mukushanya kwechikepe, Anomeritis akadaro. “Hatisi kungobatanidzwa negungwa. Ngarava dzechikepe dzinotibatanidza zvakare. Ose maviri Piraeus neIzmir mushambadzi wekushanya uye budiriro. Semachiteshi kumabvazuva kweMediterranean, tinofanirwa kushandira pamwe, ”akadaro Anomeritis. Zvichakadaro, Gurukota rezvetsika uye Tourism VaErtugrul Gunay vakataura nezuro kuSeatrade Turkish Cruise Ship Forum muIzmir kuti kana Turkey ikabatana neGreek, Gungwa reAegean raizove nzvimbo yekushanya yepamusoro pasirese. “Makore mapfumbamwe apfuura, taingova nevashanyi zviuru zvitatu kuIzmir; gore rapfuura, paive ne3,000 yeIzmir neKusadasi. Ini handina kukwanisa kutenda iyo nhamba yeIzmir. Gore rino tinofungidzira mazana matanhatu ezviuru, ”akadaro.
Seatrade Mutungamiri Chris Hayman akataura zvakare kuti muna 2011 Turkey yakanga yagashira vanopfuura mamirioni e2.2 vafambi vezvikepe. Hayman akawedzera kuti mu2011 pakanga paine 170 ngarava dzekufamba muMediterranean uye kuti makumi maviri nematanhatu vaitarisirwa gore rino.
Emirates yekushandira JFK nekaviri zuva nezuva ndege dzeA380
Indasitiri yekushanya yekuTanzania inonetsekana
Kurapwa Kutsva kweAdvanced Prostate Cancer
Gluten isina uye shuga isina: Rega vadye keke!
Chirevo Chitsva neSandals Resorts pane chiitiko chinouraya ...
Vashandi veBarbados kuSandals Resorts Vanokudzwa neMubayiro
Mbeu Yemazambiringa Inotorwa muPet Food Application Market...
Renewable Methanol Market 2022 Development Status...
Pane Iyo Iri Nani Yemutero Solution Yenguva Pfupi Kurojesa?
Barbados, Hawaii, Palau: "Maitiro ekuwana Zvitsuwa zvedu ...
Victoria House Resort & Spa Belize Inopa Yakakwana ...
Nei Chaiyo-Nguva Yevatyairi Ruzivo rwakakosha
Kupotsa Kubatanidza Link
Mafambiro Akashata Nhamba Dzinofanotaura Kushanya Kwakanaka...